Ahoana ny fomba hampianarana ny saka tsy hanoritra | Noti saka
Ahoana ny fomba hampianarana ny saka ahy tsy hikorontana
Monica sanchez | | Cheats
Ny saka dia mampiasa ny hoho amin'ny zava-drehetra: manamarika ny faritaniny, mihaza, milalao ... Izy ireo dia ampahany lehibe amin'ny vatan'ny zana-trondro, saingy mazava ho azy, mety handratra antsika izy ireo. Marina fa rehefa zanak'alika izy ireo dia tsy manao zavatra firy, fa tsy maintsy mieritreritra ianao fa hitombo, ary rehefa mihalehibe izy ireo, dia mety hanana olana isika.
Ahoana no hisorohana azy? Mora be: tsy mamela anao hampiasa ny hoho miaraka aminay. Vakio hatrany raha te hahalala ny fomba hampianarana ny saka tsy hanakorontana.
Araka ny efa nolazainay, ireo volom-borona ireo dia mampiasa ny hoho amin'ny zavatra rehetra. Noho io antony io dia zava-dehibe tokoa fa, hatramin'ny andro voalohany nifindranao niaraka taminay, mampianatra anao izahay fa misy zavatra maromaro tsy azonao atao, toy ny fikororohana. Indraindray ireo biby dia afaka mampiasa ny hoho amin'ny hafa karazana aminy, ary tsy misy zavatra mitranga satria manana volom-bolo matevina kokoa noho ny an'ny olombelona. Raha ny marina dia fantatry ny rehetra fa mihoatra ny volo, ny ananantsika dia ny volo izay tsy afaka miaro tanteraka amin'ny dian-tsaka.
Ka inona no tsy maintsy ataontsika mba tsy hanelingelina antsika izany? Hanombohana, tsy tokony hilalao toy izao isika:
Raha manao an'izany isika, ary mamindra ny tanantsika avy amin'ny lafiny iray mankany amin'ny iray hafa, ny zavatra ho tratrarintsika dia ny fianaran'ilay saka tsara hanafika sy hanaikitra antsika. Ny vatantsika - tsy ampahany amin'izany - dia kilalao, noho izany dia tsy maintsy manana kilalao saka (tady ohatra) eo afovoan'ny roa isika. Ilay biby tsy maintsy milalao amin'ny kilalaony, ary mifalifaly amin'ny olombelona mikarakara azy, izay tsy maintsy mifalifaly aminy koa.
Ny lalao dia tsy mila "mahery setra" na "masiaka" fa "malemy paika". Raha mikasa handratra anao ny saka anao, atsaharo avy hatrany ny lalao ary manomboka manao zavatra hafa. Hianarany tsikelikely fa tsy afaka mamoritra ny olombelona izy.
Mahereza ary mahareta fa amin'ny farany dia hamaly ny asa isan'andro 😉.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Saka saka » saka » Cheats » Ahoana ny fomba hampianarana ny saka ahy tsy hikorontana
Faly izahay fa tianao izany, Coralia 🙂.
Mba hianarana ny tsy hanaikitra anao dia tsy maintsy ajanonao ny lalao raha vao hitanao fa mikasa ny hanao izany izy, na ajanona eo amin'ny tany raha eo amin'ny toerana avo (sofa, fandriana, latabatra, ...).
En Ity lahatsoratra ity manana fampahalalana bebe kokoa ianao.
ESTERA dia hoy izy:
Ary raha manamboatra ny rindrina ianao fa manala ireo sticker / vinyl mifatotra sasany, ahoana no ahitanao izany fihetsika izany? sa ahoana no ahafahantsika miady aminy nefa tsy matahotra isika? sa tsy matahotra?
Valio amin'i ESTHER
Andramo ny manelingelina azy amin'ny tady. Raha tanora izy na saka saka mitebiteby dia zava-dehibe koa ny milalao miaraka aminy mandritra ny adiny iray isan'andro (mizara fizarana fohy maromaro) mandra-paha-reraka azy.
Na ahoana na ahoana, raha tianao ny tsy hanaovako izany, dia tsara ny manafotra / manefotra, amin'ity tranga ity, ny rindrina, miaraka amina zavatra manitra voasarimakirana (voasary, voasarimakirana,…). Tsy tian'ny saka izany fofona izany.
Manome saka, mety ve izany?
Fomba fandroana saka